Nin isagoo nool qoray taariikh nololeedkiisa - BBC News Somali
Nin isagoo nool qoray taariikh nololeedkiisa
22 Febraayo 2019
Xigashada Sawirka, COURTESY SARAH HUIEST
Nin 66-sano-jir ah oo ku nool magaalada New York ayaa qoray taariikh nololeedkiisa si uu dadka kale uga digo sigaar cabidda.
Geoffrey Turner wuxuu 13-kii February u geeriyooday kansarka sambabbada kaddib tobnaan sano oo uu sigaar cabayay.
"Waxaan ahaa doqon kaas oo go`aan nacasnimo ah qaadanayay, maalinba maalinta ka dambeysa," Mr Turner ayaa sidaasi qoray. "Haddii aad sigaar cabto - jooji - hadda - noloshaada ayaa ku xiran."
Adigoo 100 sano jira sigaar cabis ma billaabi lahayd?
Gabadhiisa, Sarah, ayaa BBC-da u sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay sida uu aabbaheed sameeyay.
"Waxaan cabi jiray sigaarka anigoo xitaa og inaan u dhimman doono, waxaan door biday inaan nafteyda ka qariyo xaqiiqda," ayuu taariikh nololeedkiisa ku qoray Mr Turner.
Turner waxaa bishii November laga helay kansarka heerka afaraad, kaas oo uu dhaqtarku sheegay inay sabab u tahay sigaarkii uu muddada sanadaha ah cabayay.
"Qaneecadii aan ka helayay sigaar cabidda uma qalanto xanuunka iyo dhibka aan baday qoyskeyga, lacag unbaa iga khasaartay, qoyskeyga ayaan ku kala fogaannay, si tartiir tartiib ah ayuuna u dilay jirkeyga.
"Nolol wanaagsan ayaan ku noolaa, balse waxaa jira dhacdooyin badan oo aanan la wadaagi karin qoyskeyga," ayuu yiri. "Ujeeddada sheekadani waa - ha noqonnin nacas.
"Xusuuso, noloshu way wanaagsan tahay - ha oggolaanin inaad ku weydo sigaar cabid."
Gabadhiisa Sarah Huiest ayaa BBC-da u sheegtay inay aad ula yaabtay markii uu aabbaheed tusay taariikh nololeedkiisa.
"Waxaan u sheegay inay tahay mid uu naftiisa ku cambaareynayo," ayay tiri Huiest. "wuxuu iigu jawaabay, 'waa wax xaqiiq ah'."
"Saaxiibbadeyda iyo dad aanan is garaneyn ayaa ii yimid waxayna ii sheegeen in erayada aabbahey ay yihiin kuwo ay jeclaan lahaayeen inay ka maqlaan dad qoyskooda ka tirsan," ayay tiri Huiest.
Waxay BBC-da u sheegtay in ayeeydeed ay markii ugu horreysay aragtay Turner oo sigaar cabaya isagoo labo sano jir ah - aabbaheed ayaa sidoo kale xusuustay inuu la qabsaday sigaar cabidda markii uu afar sano jir ahaa.
Mr Turner ayaa markii hore joojiyay sigaar cabidda kaddib markii uu guursaday Huiest hooyadeed, balse wuxuu dib u bilaabay 90-meeyadii mar uu safar ganacsi u aaday London, mana uusna joojin ilaa laga helo kansarka sanadkii hore.
Balse weligii sigaar kuma uusan hor cabin carruurtiisa hortooda, sida ay gabadhiisa sheegtay.
"Markii aan dhammaanteen soo koreynay 80-meeyadii iyo horraantii 90-meeyadii, wuxuu ka digi jiray sigaar cabidda wuxuuna nagu boorrin jiray inaynaan isku dayin."
Xarunta Xakameynta iyo Ka hortagga Cudurrada ee Mareykanka ayaa sheegtay in sigara cabidda uu ka mid yahay cudurrada ugu badan ee laga hortagi karo iyo kan ugu badan ee dalkaasi ka sababa dhimashada, iyadoo qiyaastii kala bar hal milyan oo qof ay sanad walba u dhintaan xaalado la xiriira sigara cabid.
TOOS Itoobiya oo maanta loogga dareeray doorashada heer federaal